Fantaro i Oratile Olivia Gabaphethe, mpikatroka ho an’ny fiteny Setswana · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra, mpiady ho an'ny fiteny afrikana rehetra amin'ny alàlan'ny sarimihetsika
Voadika ny 22 Avrily 2022 8:03 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, عربي, Español, English
Sary natolotr'i Oratile Olivia Gabaphethe ary nahazoana alàlana ny fampiasàna azy.
Anatin'ireo andiany ataonay amin'izao fotoana izao mba hanasongadinana ny asan'ireo mpikatroka mampahafantatra ireo fiteny afrikàna aty anaty habaka nomerika, tianay ny hanasongadina an'i Oratile Olivia Gabaphethe (@Oratile_Oliva) avy ao amin'ny Mafikeng any amin'ny faritany Avaratra-Andrefana, ao Afrika Atsimo.
Mpanoratra matianina ho an'ny sarimihetsika i Oratile, ary efa Lehiben'ny Fanoratana ho an'ny “Sephiri se Tutetse”, sarimihetsika fohy amin'ny fiteny Setswana, izay noforonina avy ao amin'ny tetikasa HerStory Women Filmmakers Incubation an'i Lerato Mileng. Mbola hivoaka ihany koa ny sarimihetsika iray hafa mitondra lohateny hoe “Taratasy ho an'ny Fiarahamonina” nandraisan'i Oratile anjara amin'ny maha-mpanoratra tantara. Na dia ny hitondra ny fiteny Setswana eny anatin'ireo media hafa sy sarimihetsika fohy aza no faniriany fatratra, mahazo tombony amin'ny asany daholo ireo fiteny afrikàna.
Rising Voices (RV): Ahoana izao no toerana misy ilay fiteny ety anaty aterineto sy ivelany?
Oratile Olivia Gabaphethe (OOG): Amin'ny fanomezana fahafahampo an'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny, ny fiteny anglisy no tena fitaovana iasako. Kanefa, ny firotsahako ety anaty serasera sy ivelany dia mandray miaraka ny fiteny Setswana, isiZulu, isiXhosa, Sepedi, Sesotho, sy Swati. Amin'ny alàlan'ny asako, manohy ihany koa aho mianatra ny fiteny Venda, Xitsonga, ary efa mihatsara kokoa ny voambolana Afrikaans ananako.
Miaraka amin'ireo fitetezam-paritra rehetra entin'ilay indostria, dia nifangaroharo tamina kolontsaina, fombandrazana sy fomba fiaina isankarazany aho, ary tsapako fa misokatra amin'izy ireny aho no sady miroborobo koa ao anatin'ny fanolorantenako. Na eo aza ireo tetikasako Setswana, manohy tetikasa hafa ihany koa aho, amin'ny anarako, miaraka amin'ny mbola ho famoahana ny fampiasàna fiteny isankarazany ho toy ny fitaovana.
OOG: Ireo andian-taranaka ho avy no tena hery manosika ahy.
Tsy misy zavatra hahafaly ny foko mihoatra noho ny mahita ireo izay handimby ahy hiaina ao anatiny sy hanaiky ny maha-izy azy, tsy mila manova ny tenany. tahaka izany isika teo am-pitomboana; Teo ny Setswana ary ny ankamaroan'ny olona, raha tsy ny tsirairay mihitsy, dia nanana zavatra holazaina momba ny Setswana amin'ny maha-fiteny iray azy, araka ilay fiteny.
Na izany aza, rehefa nifandimby ny taona, voatilin'ny radar fa, na tsy raharahiana mihitsy ilay fiteny, na omena endrika ratsy. Ny lova ara-kolontsaina, ny fitahirizana ilay fiteny ataon'ny olona, ho an'ny olona mpampiasa azy, ireny rehetra ireny dia samy ampahany amin'ny hery mandrisika ahy avokoa.
RV: Farito ny sasantsasany amin'ireo fanamby manakana ny fiteninao ho tsy afaka ampiasaina feno ety anaty tambajotra
OOG: Ny vahoaka tompony ihany no nihevitra ny fiteny Setswana hoe an'ny “tambanivohitra”, indrindra fa ireo tanora taranaka vaovao. Avy amin'izay, tsy ampy ny votoaty vita avy amin'ny fiteninay ety anaty tambajotra. Miaraka amin'izany olana izany, lasa tena sarotra ny mamoaka votoaty ao, sy ny mandresy lahatra ny olona hanjifa azy, satria tsy liana akory aza ry zareo. Nisy ny fitomboan'ny faniriana hotafiditra ao anatin'ny kolontsaina hafa sy hiteny fiteny hafa, raha tokony mba hitazona ny maha-izy azy sy ny mampiavaka ny tena.
RV: Aminao, inona no dingana mivaingana azo atao mba handrisihana ny tanora hanomboka hianatra ny fiteniny na hanohizany hampiasa ny fiteniny?
OOG: Isika tsy hiandry velively hoe hiova ny safidy. Ny zavatra tokana azo atao dia ny manohy mamorona votoaty sy mikarakara atrikasa fampianarana ho entina mampianatra olona maromaro kokoa, mitondra azy ireo tsikelikely hiverina an-doharano. Ao anivon'io asa io, ilaina ny olona iray tena liana tokoa amin'ny fiteniny sy ny kolontsainy mba hampianatra ny olona hanao toraka izany koa. Ny fanokafana habaka ho an'ny fiteny dia fepetra iray azo raisina ary voaporofo fa tena mahomby.